हवाई इन्धनको मुल्य घटेपछि घट्यो हवाई भाडा, हेर्नुस् कुन जिल्लामा कति भाडा घट्यो ? « Light Nepal
हवाई इन्धनको मुल्य घटेपछि घट्यो हवाई भाडा, हेर्नुस् कुन जिल्लामा कति भाडा घट्यो ?
Published On : 11 January, 2019 9:40 pm
काठमाडौं, २७ पुष । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक वायुसेवाले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि आन्तरिक वायुसेवाले पनि भाडा घटाएका छन्।निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर १० रुपैयाँले इन्धनको मूल्य घटाएपछि आन्तरिक उडानका वायुसेवाले आइतबारबाट लागू हुने गरी हवाई भाडा घटाएका हुन्।
संघले माउन्टेन फ्लाइटसहित काठमाडौं विमानस्थललाई आधार बनाएर ११ वटा गन्तव्यको लागि हवाई भाडा घटाएको छ।
घटेको भाडा अनुसार आइतबारदेखि नयाँ भाडादरमा यात्रुले उडान गर्न पाउने छन्। यस्तो हवाई इन्धनको मूल्य घटेकोले फ्युल चार्जवापतको शुल्क घटाउँदा हवाई भाडा पनि घटेको संघले जानकारी दिएको छ।
संघका अनुसार सबैभन्दा कम काठमाडौंबाट सिमराको लागि घटेको छ। सिमरामा ९० रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी काठमाडौंबाट धनगढीको लागि घटेको छ। काठमाडौं धनगढीको भाडा ४४० रुपैयाँले घटेको छ। आन्तरिक उडानमा काठमाडौं सिमरा सबैभन्दा छोटो दूरीको ९२० मिनेट० र काठमाडौं धनगढी सबैभन्दा टाढा ९सवा घण्टा०को गन्तव्य मानिन्छ।